Xoghayihii Hore Ee Arrimaha Dibadda Ee Maraykanka Oo Isku-diwaangelinaysa Muslimnimo – Murtimaal
Xoghayihii Hore Ee Arrimaha Dibadda Ee Maraykanka Oo Isku-diwaangelinaysa Muslimnimo
01/29/2017 Video News NEWS
CAJIIB Xoghayihii Hore Ee Arrimaha Dibadda Ee Maraykanka Oo Isku-diwaangelinaysa Muslimnimo..
Xog-hayihii hore ee Arrimaha dibadda Dalka Maraykanka ayaa sheegtay in ay Muslim ahaan isu diiwaangalin doonto haddii Madaxweyne Donald Trump uu sameeyo diiwaangalin u gaar ah Muslimiinta Maraykanka.
Madeleine Albright oo siyaasiyad ah ayaa sheegay in ay diyaar u tahay ‘diiwaangalintaas” iyadoo uga gol leh inay ka horjeedaan qorshaha Madaxweynaha.
Albright oo ah haweenaydii u horaysay ee Maraykanka ka noqota xoghaye arrimo dibadeed ayaa Twitter-keeda ku soo qortay in mad-habta Kaatoligga lagu barbaariyay, laakiin ay mar dambe ogaatay in qoyskeedu uu Yuhuud yahay.
“Waxaan diyaar u ahayn inaan Muslim ahaan isu diiwaangeliyo aniga oo garab istaagaya Muslimiinta Maraykanka.” ayay ku soo qortay Twitter-keeda, tobanaan kun ayaana muujiyay in ay arrintaas u bogeen iyaga oo ku muujiyay calaamadda Suultaagidda ama Like saaray.
Hadalkeedan ayaa yimid iyadoo la isla dhexmarayo in madaxwaynuhu uu saxeexi doono in baadhitaan adag la sameeyo, qaxootigana la mamnuuco, lana mamnuuco in dadka ka imanaya todobo dal oo ay ku jiraan Suuriya, Yemen iyo Ciraaq.
Laakiin, lama soo hadal qaadin in bilaha soo socda la diiwaangelin doono Muslimiinta Maraykanka, arrintaas oo Trump uu sheegay in uu dhaqangelin doono mar uu wareysi bixinayay sanadkii 2015kii, laakiin markii dambe wuu iska fogeeyay hadalkaas.
Previous Post:Cajiib Daawo sidi loogu soo dhaweyey Fanaanada Xamda Yar madaxtooyada Somaliya
Next Post:Wali Ninkaagi xalaasha ahaa ma ku kufsaday Waa gabadh ka sheekaynaysa dhib ka qabsatay ninkeeda habeenki aqal galka